63 Ònye bụ onye a si Idọm+ na-abịa, onye yi uwe tụrụ àgwà nke na-egbuke egbuke, onye si Bọzra+ na-abịa, onye a nke yi uwe dị ebube, onye ji ike ya dị ukwuu na-azọ ije? “Ọ bụ m, Onye na-ekwu okwu n’ezi omume,+ Onye jupụtara n’ike nzọpụta.”+ 2 Gịnị mere ákwà gị ji na-acha uhie uhie, uwe gị adịkwa ka nke onye na-azọcha mkpụrụ vaịn nke dị n’ebe nzọchapụta mmanya?+ 3 “Ọ bụ naanị m zọchara mkpụrụ vaịn+ nke dị n’ebe nzọchapụta mmanya, mgbe ọ na-adịghị onye ọ bụla si n’etiti ndị dị iche iche nke sonyeere m. Anọgidere m na-azọcha ha n’iwe m,+ anọgidekwara m na-azọpịa ha n’ọnụma m.+ Ọbara ha nke na-agbapụta nọ na-efesa m n’uwe,+ m wee metọọ uwe m niile. 4 N’ihi na ụbọchị ịbọ ọbọ dị m n’obi,+ afọ a ga-agbapụta ndị a eruwo. 5 Anọ m na-ele anya, ma e nweghị onye inyeaka; o wee ju m anya, ma ọ dịghị onye na-enye nkwado.+ Ya mere, eji m ogwe aka m weta nzọpụta,+ ọ bụkwa ọnụma m+ kwadoro m. 6 M wee jiri iwe na-azọda ndị dị iche iche n’ala. M wee mee ka ọnụma m na-egbu ha ka mmanya,+ meekwa ka ọbara nke na-agbapụta ha n’ahụ́ na-awụsa n’ala.”+ 7 M ga-ekwu okwu banyere obiọma* Jehova,+ banyere otuto Jehova, dị ka ihe niile Jehova meere anyị si dị,+ bụ́ oké ịdị mma ya n’ebe ụlọ Izrel nọ,+ nke o gosiri ha dị ka ebere ya+ na obiọma ya si dị ukwuu. 8 O wee gaa n’ihu ịsị: “N’ezie, ha bụ ndị m,+ ụmụ m ndị na-agaghị agbakụta m azụ.”+ Ya mere, ọ bụ ha ka ọ ghọọrọ Onye Nzọpụta.+ 9 N’oge niile ha nọ na-ata ahụhụ, ọ nọ na-ewute ya.+ Onye ozi nke ya zọpụtara ha.+ Ọ gbapụtara ha n’ihi ịhụnanya na ọmịiko ya,+ o wee bulie ha, na-ekukwa ha ụbọchị niile kemgbe oge dị anya gara aga.+ 10 Ma ha nupụrụ isi,+ meekwa ihe wutere mmụọ nsọ ya.+ O wee ghọọrọ ha onye iro.+ O busoro ha agha.+ 11 Ha wee cheta oge dị anya gara aga, chetakwa ohu ya Mozis, sị: “Olee ebe Onye ahụ nke ji ndị na-azụ ìgwè atụrụ ya+ kpọpụta ha n’oké osimiri nọ?+ Olee ebe Onye nyere ya mmụọ nsọ ya nọ?+ 12 Onye mere ka ogwe aka Ya mara mma+ na-aga n’aka nri Mozis; Onye kewara mmiri n’ihu ha+ iji meere onwe ya aha nke ga-adịru mgbe ebighị ebi;+ 13 Onye mere ka ha were ụkwụ gafee mmiri na-ekwo ekwo n’asụghị ngọngọ,+ dị ka ịnyịnya nke na-aga n’ala ịkpa? 14 Dị nnọọ ka mgbe anụmanụ gbadara na ndagwurugwu,* mmụọ Jehova mere ka ha zuru ike.”+ Otú a ka i si duru ndị gị iji meere onwe gị aha mara mma.+ 15 Si n’eluigwe lee anya,+ sikwa n’ebe obibi gị dị elu hụrụ, bụ́ ebe obibi dị nsọ, nke mara mma.+ Olee ebe ịnụ ọkụ n’obi gị+ na ike gị niile dị, afọ mgbarụ gị,+ na ebere gị?+ Ha adịghị erute n’ebe m nọ.+ 16 N’ihi na ị bụ Nna anyị;+ ọ bụ ezie na o nwere ike ịbụ na Ebreham amaghị anyị, o nwekwara ike ịbụ na Izrel amaghị anyị, gị onwe gị, Jehova, bụ Nna anyị. Onye Mgbapụta anyị kemgbe oge dị anya gara aga bụ aha gị.+ 17 Jehova, gịnị mere i ji na-eme ka anyị si n’ụzọ gị kpafuo? Gịnị mere i ji na-eme ka obi anyị kpọọ nkụ ka anyị ghara ịtụ egwu gị?+ Lọta n’ihi ndị ohu gị, bụ́ ebo niile nke ihe nketa gị.+ 18 Ọ bụ nke ndị gị dị nsọ+ ruo nwa oge. Ndị iro anyị azọdawo ebe nsọ gị.+ 19 Ruo ogologo oge, anyị dị ka ndị ị na-achịghị, dịkwa ka ndị a na-akpọkwasịghị aha gị.+